Zavatra Zavatra Tokony ho Fantatrao Amin'ny Oseana
Ny fahaiza-mamaky teny avy amin'ny ranomasina no manan-danja ho an'ny taranatsika sy ho avy
Zavatra iray izay mety ho efa henonao aloha izany, saingy mamerina izany: ny mpahay siansa dia nanoratra bebe kokoa momba ny moron-tanin'i Moon, Mars, ary Venus fa tsy tany amin'ny tany afovoan-tany. Misy antony izany, na izany aza, mihoatra ny tsy firaharahiana ny ranomasina. Sarotra kokoa ny manoritra ny haben'ny ranomasimbe eny an-dranomasina, izay mitaky ny fandrefesana ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fampiasana sôtô amin'ny faribolana akaiky, fa tsy ny fiparitahan'ny volana eo ho eo na planeta, izay azo atao amin'ny radar avy amin'ny satelita.
Misintona ny ranomasimbe manontolo, izany dia eo amin'ny famokarana ambany kokoa (5km) noho ny volana (7m), Mars (20m) na Venus (100m).
Mazava ho azy fa tsy fantatra ny ranomasimbe eto an-tany. Manjary sarotra ho an'ireo mpahay siansa izany, ary ny olom-pireneny dia hahatakatra tanteraka io loharano mahery sy manan-danja io. Ny olona dia mila mahatakatra ny fiantraikany eo amin'ny ranomasina sy ny fiantraikan'ny ranomasina eo aminy - mila ny fahaizana mamaky ranomasina ny mponina.
Tamin'ny volana Oktobra 2005, vondron'ny fikambanana nasionaly no namoaka lisitr'ireo fitsipika 7 lehibe sy foto-kevitra lehibe 44 an'ny Ocean Science Literacy. Ny tanjon'ny Ocean Literacy dia telo heny: mba hahatakatra ny siansa momba ny ranomasina, ny fifandraisana amin'ny ranomasina amin'ny fomba manan-danja ary ny fanapahan-kevitra sy ny tompon'andraikitra amin'ny politika momba ny ranomasina. Indreto ireto fitsipika fototra manan-danja ireto.
1. Manana Ranomasimbe Indianina ny Tany
Manana kontinanta fito ny tany, fa ny ranomasina iray kosa. Ny ranomasina dia tsy zava-poana: mihidy ireo faritry ny tendrombohitra miaraka amin'ireo volkano marobe kokoa noho ny any an-tanindrazana, ary mampihetsi-po ny rafitra misy sy ny rivotra mahery vaika.
Ao amin'ny tectonics plastika , ny takelaka ranomasimbe ao amin'ny literatiora dia mampifangaro ny moron-kiranoka mangatsiaka amin'ny akanjo mafana mandritra ny an-tapitrisany taona. Ny ranon'ny ranomasimbe dia miaraka amin'ny ranom-boasary izay ampiasaintsika, mifandray aminy amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny rano manerantany. Na izany aza dia lehibe ny ranomasimbe, ary voafetra ny hareny.
2. Ny Oseana sy ny Fiainana any Oseana dia manova ny endriky ny tany
Amin'ny fotoana ara-jeolojia, manjaka ny tany ny ranomasina. Ny ankamaroan'ireo vatolampy nipoitra teny amin'ny tany dia napetraka teo ambany rano raha ambony noho ny ankehitriny ny haavon'ny ranomasina. Ny vatosokay sy ny cherta dia vokatra biolojika, noforonina avy amin'ny vatan'ny fiainana an-dranomasina mikrôkôpika. Ary ny ranomasina dia mamaritra ny moron-dranomasina, fa tsy amin'ny rivo-doza fotsiny, fa amin'ny asa maharitra amin'ny fikajiana sy ny fanjavonan'ny onja sy ny onja.
3. Ny Oseana dia hery lehibe amin'ny toetrandro sy ny toetrandro
Marina tokoa fa ny ranomasina dia manjaka ny toetr'andro manerantany, mitondra fiaramanidina telo maneran-tany: rano, karbaona ary angovo. Ny ranon'orana dia avy amin'ny alàlan'ny ranomasina mipoitra, tsy mamindra rano fa ny angovo avy amin'ny masoandro izay nalainy avy tany an-dranomasina. Ny zavamaniry eny an-dranomasina dia mamoaka ny ankamaroan'ny oksizenina erantany; Ny ranomasina dia mandray ny antsasaky ny gazy karbonika miondrika. Ary ny onja amoron-dranomasina dia mitondra hafanana avy any amin'ny tendrony manoloana ireo bao-rehefa miova ny elanelana, ny fiovan'ny toetrandro koa.
4. Mampiova ny tany ny Ranomasimbe Indianina
Ny fiainana tany an-dranomasina dia nanome ny oksizenina ny atmosfera, nanomboka tamin'ny Proterozoic Eon efa ho arivo taona lasa izay. Nipoitra teny amin'ny ranomasina ny fiainana. Amin'ny fiteny Geochemic, ny ranomasina dia namela ny Tany hitazona ny onjam-panafody sarobidy voaràra amin'ny endriky ny rano, izay tsy very tany amin'ny habaka ivelany raha tsy izany.
5. Ny ranomasina dia manohana ny fahasamihafan'ny fiainana sy ny tontolo iainana
Ny habaka miaina any an-dranomasina dia lehibe lavitra noho ny toerana misy ny tany. Toy izany koa, misy vondrona lehibe kokoa amin'ny zavamananaina any an-dranomasina noho ny tany. Ny fiainana an-dranomasina dia ahitana ny rantsan-kazo, ny mpilomano ary ny tsimokaretina, ary ny tontolo iainana lalina dia miankina amin'ny angovo azo avy amin'ny angovo tsy misy masoandro avy amin'ny masoandro. Ny ankamaroan'ny ranomasina kosa dia efitra sy rano ary vatoharan-dranomasina-na faritra manintona loatra - manohana ny fiainana be mponina indrindra eran-tany. Ary ny morontsiraka dia mampiroborobo ny fahasamihafan'ny toeram-piainana miaina amin'ny onjampeo, ny angovo sy ny rano lalina.
6. Ny ranomasina sy ny an'ny olombelona dia mifamatotra tsy tapaka
Ny ranomasimbe dia manolotra antsika ny harena sy ny loza. Avy amin'izany no ahazoantsika sakafo, fanafody ary mineraly; Ny varotra dia miankina amin'ny lalana an-dranomasina. Ny ankamaroan'ny mponina dia miaina eo akaikiny, ary mahafinaritra ny fialam-boly.
Mifanakaiky ny tafiotra an-dranomasina, ny fiovan'ny tsunamis sy ny ranomasina dia manohintohina ny fiainana amoron-dranomasina. Fa ny zava-misy kosa, ny fiantraikan'ny olombelona amin'ny ranomasina amin'ny fampiasantsika, ny fanovana, ny fandotoana ary ny fanaraha-maso ny asa ataontsika. Ireo no raharaha mahakasika ny governemanta sy ny olom-pirenena rehetra.
7. Ny Ranomasimbe Indrindra no tsy fantatra
Miankina amin'ny tsipiriany fotsiny ny .05% hatramin'ny 15% amin'ny ranomasinay. Satria manodidina ny 70% amin'ny tany manontolo ny ranomasimbe, dia midika izany fa 62.65-69.965% ny Tany no tsy voamarina. Rehefa mitombo hatrany ny fianteherantsika amin'ny ranomasina, dia mbola manan-danja kokoa ny siansa an-dranomasina amin'ny fitazonana ny fahasalamana sy ny lanjan'ny ranomasina, fa tsy mahafa-po fotsiny ny fahalianantsika. Ny famakafakana ny ranomasina dia mila talenta maro samihafa - biologists , chemists , technicians, programmers, physicists, engineers and geologists . Mitaky karazana fitaovana sy programa vaovao izany. Mitaky soso-kevitra vaovao koa izany-angamba ny anao, na ny zanakao.
Nataon'i Brooks Mitchell
Tena tsara kokoa ve ny koveta kobay amin'ny fanondranana taovolo mena?
Fall Equinox - Libra, Scorpio ary Sagittarius
Geology, Siansa momba ny Tany sy Geoscience: Inona ny fahasamihafana?
Inona avy ireo ohatra amin'ny fanafody?
Fitsidihana an'i Sharktooth Hill
Inona no fahasamihafana eo amin'ny siansa mafy sy ny mozika?
Ny famaritana ny asan'ny fizika
Mamotaka siramamy amin'ny rano: Fiovana ara-batana na ara-batana?
Torolàlana ho an'ny Tombontsoa Frantsay
Nahoana no atokisana ny atoma?
Literature Miscellany, Boky 1: Zava-mahadomelina, Teny nalaina, ary Trivia
Ny toetra mampiavaka ny talen'ny sekoly mahomby
Ny tantaram-piainan'i Helen Keller
Inona no atao hoe tsy fanarahan-dalàna?
Ny Knights Hospitaller - mpiaro ny marary sy ireo mpamonjy voina
Real ary Reel
Fitaovana fanontam-pirinty natao printable
Top 10 fanontaniana momba ny sekoly tsy miankina
Ny fomba fitantanana sy ny Maple Japoney ID
Fikambanana ara-pinoana ao amin'ny gnostisma
Ahoana no fomba hitazonana fitaovana hanakanana ny kodianao?
Anarana ireo singa mety azo ampiasaina amin'ny fampiasana singa element
Moliere sy finoanoam-poana
Totozy Portogey 20 Notoherim-bady
Mpitarika amin'ny International Business
4 Mamoatra Rafitra Vehivavy 1
Inona no atao hoe fanimbana biby?
Ny Fomba Folo Anjaran'ny Cricket
Fifandirana mifanohitra amin'ny fitantanana ny efitrano fianarana
Vavaka ho an'ny fialan-tsasatra ho an'ny tanora kristianina
Fitsapana momba ny Thermodynamika
Famaritana sy ohatra amin'ny anaram-bosotra
Miara-misakafo any Kalifornia Atsimo
The Notebook Golden